Bulshada Muqdisho Oo ka qeyb galay shir looga hadlayey qorshaha Soomaaliya iyo shirka Brussels – Radio Daljir
Bulshada Muqdisho Oo ka qeyb galay shir looga hadlayey qorshaha Soomaaliya iyo shirka Brussels
Luulyo 16, 2013 6:47 b 0
Muqdisho, July 16- 2013 – Wasiirka wasaarada maaliyada iyo qorsheynta ee Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamuud Xasan suleymaan, ?ayaa maanta ka qeyb galay kulan xog aruurin ah oo ay qeyb ka galeen qeybaha bulshada ee magaalada Muqdisho, iyadoo diirada la saarayey qorshaha dowlada Soomaaliya ee loo yaqaan (New Deal).
Kulan ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa aad loogu gorfeeyey sidii dowlada Soomaaliya ay fekrado mideysan ula tegi lahayd Brussels, halkaas ?oo uu shirka dhaqaale siinta Soomaaliya ka dhacayo bisha September, waxaana qeybihii kala duwanaa ee bulshada ee kulankaas ka qeyb galay laga aruuriyey fikrado la xiriira nooca loo maamulayo iyo sida loo qorshaynayo dhaqaale Soomaaliya uu caalamku siinayo.
Dowlada Soomaaliya ayaa dooneysa in ay qorshe mideysan la tagto shirka ka dhacaya magaalada Brussels ee lagaga hadlayo soo kabashada Soomaaliya, iyadoo caalamku siinayo dalka Soomaaliya lacag fara badan oo la doonayo in lagu soo nooleeyo adeegyadii bulshada ee dalka.
? Qorshaha Hiigsashada Cusub ama New Deal waa ?hannaan si toos ah dalalka burburay loo siiyo deeqo dhaqaale si ay ugu kabaan baahiyahooda oo ay iyagu garanayaan. Shirarkan wadatashiga waxaa laga samaynayaa dalka oo dhan? sidaasi ayuu yiri Wasiirka maaliyada Mr. Suleymaan.
Urruradii kala duwaanaa iyo qeybihii bulshada ee fikirkooda dhiibtay ayaa sheegay in loo baahan yahay in mar kasta diirada la saaro, ?meelaha ?ku haboon in lagu kabo dhaqaalaha uu caalamku siinayo Dowlada Soomaaliya, si ay ugu maarayso baahideeda.
Madaxa hay?ada SWDC Maryam Takhal Xuseen oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay?Kobcinta wacyiga dadka iyo waxbaradhada ubadka ayaa ugu mudan maal-galinta caalamka, waxaa xiga daryeelka caafimaad iyo in dadku helaan cadaalad u shaqaysa,?
Wasaarada Maaliyada ee Soomaaliya waxay kaloo sheegtay in shirarka wadatashiga ah ay ka sii socon doonaan dalka ka hor inta aan la aadin dhanka Beljium-ka oo uu ka dhacayo shirka dhaqaalaha loogu yaboohayo Soomaaliya, waxay wasaaradu xustay in shirkaasi uu ka dhacay dhowaan Baydhabo, Garoowe, iyo Hargaysa.
Warfaafinta Soomaaliya Oo ku war-gelisay xaruumaha warbaahinta dalka in ay is diiwaan geliyaan
T+T:- Al-waaxa iyo Xamdaan Secondary oo barbar dhac galay iyo Mubaarak dhahar oo guuleystay